Roma oo Badisay iyo AC Milan oo Laga Badiyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Roma oo Badisay iyo AC Milan oo Laga Badiyay “SAWIRRO”
Kooxda Udinese ayaa waxaa garoonkeeda Stadio Friuli 0-1uga badiyay kooxda Roma oo dhanka dhibcaha horyaalka la simantay kooxda Juventus.
Kooxda Roma ayaa daqiiqadii 17-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Davide Astori.
Tababaraha kooxda Roma Rudi Garcia ayaa ku baaqay in horyaalka talyaaniga laga hir galiyo qalabka goolka la galiyo ee goal-line technology,kaasi oo lagu ogaado in uu goolka dhashay iyo in kale.
Kooxda Roma ayaa ku dhibco noqotay kooxda Juventus oo caawo la ciyaareyso kooxda Inter Milan,waxana ay wada leeyihiin min 39-dhibcood,halka kooxda Udinese ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 22-dhibcood.
Dhanka kale kooxda AC Milan ayaa waxaa garoonkeeda San Siro 1-2 uga badiyay kooxda Sassuolo.
Kooxda AC Milan ayaa goolka a hor martay,waxaana daqiiqadii sagaalaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Andrea Poli.
Ciyaaryahan Nicola Sansone ayaa daqiiqadii 28-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Sassuolo,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Simone Zaza ayaa daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta goolka labaad ee guusha u dhaliyay kooxda Sassuolo.
Kooxda AC Milan ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinra todobaad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka kooxda Sassuolo ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh23-dhibcood.
Kooxda Parma oo ugu hooseyso horyaalka talyaaniga ayaa garoonkeeda Ennio Tardini 1-0 uga badisay kooxda Fiorentina.
Ciyaaryahan Andrea Costa ayaa daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Parma.
Ciyaryahan Mario Gomez ayaa rigoore ka qasaariyay kooxda Fiorentina,waxana sidoo kale kaarka casaanka ah ka qaatay ciyaaryahanada kala ah Gonzalo Rodriguez iyo Stefan Savic.
Kooxda Parma oo uu hogaamiyo macalin Roberto Donadon ayaa gaartay guusheedii sedaxaad ee horyaalka.
Kooxda Fiorentina ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 24-dhibcood,halka kooxda Parma ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseya.
Kooxda Palermo ayaa garoonkeeda Stadio Renzo Barbera ku xasuuqday oo 5-0 uga badisay kooxda Cagliari.
Ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa labo ka mid ah goolasha u dhaliyay kooxda Palermo,halka goolasha kale ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kala ah Michel Morganella, Ezequiel Munoz iyo Edgar Barreto.
Tababaraha cusub ee kooxda Cagliari Gianfranco Zola ayaa guul darro lagu soo dhaweeyay.
Kooxda Palermo ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka kooxa Cagliari ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseya.
Dhageyso warka habeennimo ee Radio Mudisho
Madxweynaha Puntland oo ka hadlay dagaallada Galgalo